Fikambanana Jarmela : Asa tanana atao lavanty -
AccueilVaovao SamihafaFikambanana Jarmela : Asa tanana atao lavanty
Fikambanana Jarmela : Asa tanana atao lavanty
31/08/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Fikambanana miorina etsy Ampefiloha Cité, ary manana tanjona amin’ny fampiroboroboana ny kolontsaina malagasy. Ao anatin’ny fanatanterahana ny tetikasan’izy ireo dia hanolotra hetsika ho fitadiavam-bola ny fikambanana ny sabotsy 1 septambra izao etsy amin’ny Kudeta Anosy. Mandritra izany dia hisy ny lavanty ataon’ny fikambanana Jarmela Koonaction, ka ireo vokatry talentan’ireo mpanakanto samihafa no atolotra amin’izany. Anisan’ny nanolotra ny sangan’asany ilay mpanao sora-drindrina sy hosodoko Clipse Tean, Isaac (Hosodoko), Rijasolo (saripika), Naty Kaly (Hosodoko), Rina, Rado Andriamanisa (Hosodoko)…
Ankoatra ny lavanty dia mpanakanto maro eo amin’ny sehatry ny mozika no hanafana ny seho toa an-dry Silo, Oloblaky, Naday ary Bradih…
Hatramin’ny nijoroany, dia maro ireo hetsika efa nataon’ny Jarmela Koonaction ka ao anatin’izany ny « Koz’25 » izay tanterahina isan-taona etsy Ampefiloha. Toa izany koa ny tetikasa « manara-drindrina », izay natao hanatsarana ireo rindrina eto Antananarivo amin’ny alalan’ny sary sy ny sora-drindrina.
Governemanta Mapar : Mampihorohoro vahoaka